जितिया पर्वको अवसरमा चितवनमा विभिन्न कार्यक्रम - Enepalese.com
नेपालको समय: १५:२३ | Washington DC: 05:38
जितिया पर्वको अवसरमा चितवनमा विभिन्न कार्यक्रम
रत्ननगर, चितवन, २७ भाद्र ।
थारु महिलाहरुको महत्वपूर्ण चाड जितियाको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । पडरिया थारु आमा समूह रत्ननगर ७ को आयोजनामा आज जितिया मौलिक साँस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको छ । कार्यक्रममा थारु महिलाहरुले झाम्टा नृत्य लगायतका विभिन्न नृत्य र थारु गीत प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमका रत्ननगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिमला दुवाडीले जाती, धर्म र संस्कृतिमा धनी हामी नेपालीहरुले आ–आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताइन् । हरेक नेपालीले सबैको धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने बताउँदै उनले बिदेशीहरु नेपालीको संस्कृति र रहनसहन हेर्न पनि नेपाल घुम्न आउने गरेको बताईन् । कार्यक्रमका रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजाराम रेग्मीले आदिवासी थारु समुदायको संस्कृति जगेर्ना गर्न व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा सधै सहयोग गर्ने बताए । आफु पनि थारु संस्कृति र समुदायबाटै हुर्केको बताउँदै उनले देशकै पूरानो संस्कृतिको रुपमा रहेको थारु जातीको संस्कृति जगेर्ना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएको बताए ।
आमा समूहकी अध्यक्ष मञ्जु चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष लाल बहादुर भट्ट, थारु कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नं. ८ का अध्यक्ष रामेश्वर महतो, सुनिता चौधरी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी जितिया पर्वको अवसरमा सौराहामा बाघ संरक्षणमुलक झाम्टा नृत्य प्रतियोगिता गरिएको थियो । बाघ संरक्षण उपसमितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख नारायण वन, उपप्रमुख बिमला दुवाडी, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कडेल, समुदायमा आधारित चोरीशिकार नियन्त्रण युवा जागरण अभियानकी अध्यक्ष डोमा पौडेल, मृगकुञ्ज उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बासुदेव ढुंगाना लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तैगरी जितिया पर्वकै अवसरमा पदमपुर, सगुनटोल, पर्सा लगायतका विभिन्न स्थानमा पनि कार्यक्रम गरिएको थियो ।
२०७४ भदौ २७ गते १७:०८ मा प्रकाशित